4 အမှားအယွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြောင့်ဒေသခံ SEO အားထိခိုက်စေ | Martech Zone
ဒေသတွင်းရှာဖွေမှုတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုများပြုလုပ်နေသည်။ ဂူဂဲလ်တွင်ကြော်ငြာ ၃ ခုတင်ထားပြီးထိပ်ဆုံးမှ ၄ င်းတို့၏အထုပ်များကိုလျှော့ချပြီး၊ မကြာခင်ပြည်တွင်း packs တွင်ပေးချေရမည့် ၀ င်ငွေပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျဉ်းမြောင်းသောမိုဘိုင်း display များ၊ အက်ပလီကေးရှင်းများဖြန့်ကျက်ခြင်းနှင့်အသံရှာဖွေခြင်းများသည်မြင်သာမှုအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူပြုသည်။ ဒေသတွင်းရှာဖွေရေးအနာဂတ်ကိုရည်ညွှန်း။ အမျိုးမျိုးသောစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစွမ်းရည်များလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်၊ များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဒေသခံ SEO အတွက်အခြေခံကျကျမရရှိခြင်းအားဖြင့်အခြေခံအကျဆုံးအဆင့်သို့ပြန်သွားလိမ့်မည်။
အထူးသဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်ပိုမိုအားနည်းချက်များရှိနေသော SEO များပြုလုပ်သောအမှားအယွင်းလေးခုကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
၁။ Call Tracking နံပါတ်များကိုမမှန်ကန်ပါ
ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံနံပါတ်များသည်ဒေသတွင်းရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၌ရှည်လျားသောမညီမညာဖြစ်နေသောကြောင့် ၀ က်ဘ်ပေါ်မှမတူညီသောအချက်အလက်များကိုဖန်တီးရန်နှင့်ဒေသဆိုင်ရာအဆင့်များကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်၎င်းတို့အားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအချက်အလက်များကိုပေးရန်ဂရုတစိုက်ဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည်။ စတင်ရန်အတွက်အကြံပြုချက်များမှာ -
နည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင်၏လက်ရှိနံပါတ်ပေါ်တွင်ခေါ်ဆိုမှုများကိုခြေရာခံနိုင်စေရန်သင်၏လက်ရှိ၊ အမှန်တကယ်စီးပွားရေးနံပါတ်ကိုခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုသို့ port လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည်သင်၏စီးပွားရေးစာရင်းများကိုပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်ချက်ကိုသက်သာစေသည်။
သို့မဟုတ်၊ သင်၏စီးပွားရေးစာရင်းများသည်ကျောက်တုံးများ၊ ကိုက်ညီမှုမရှိသောပုံစံနှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေပါက၊ ဒေသတွင်းကုဒ်နံပါတ်ပါသည့်ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းနံပါတ်အသစ်ကို ရယူ၍ သင်၏နံပါတ်အသစ်အဖြစ်အသုံးပြုပါ။ မည်သည့်နံပါတ်ကိုမဆိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုမီနံပါတ်ကိုယခင်ကအသုံးပြုခဲ့သောအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အချက်အလက်ခြေရာများမရှိသေးကြောင်းသေချာစေရန် ၀ က်ဘ်ပေါ်တွင်ရှာဖွေပါ။ သင်၏ခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းနံပါတ်အသစ်ရရှိပြီးနောက်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရင်းများ၊ သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်သင်၏ကုမ္ပဏီအားဖော်ပြသည့်အခြားပလက်ဖောင်းများ (အခကြေးငွေပေးသောကြော်ငြာပလက်ဖောင်းများမှအပ) တွင်သင်၏နံပါတ်အသစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ သင်၏ရည်ညွှန်းချက်သန့်ရှင်းရေးလှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ပါ။
သင်၏ pay-per-click ကြော်ငြာများသို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းကြော်ငြာများတွင်သင်၏အဓိကခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းနံပါတ်ကိုမသုံးပါနှင့်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အချက်အလက်သည်အော်ဂဲနစ်နှင့်လခပေးသောစျေးကွက်မှရရှိခြင်းရှိမရှိကိုခြေရာခံရန်သင်၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်။ သင်၏လစာပေးသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများအတွက်ထူးခြားသောဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနံပါတ်များကိုရယူပါ။ ၎င်းတို့ကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များဖြင့်ရည်ညွှန်းထားခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့သည်သင်၏ဒေသခံစီးပွားရေးအချက်အလက်များ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုမထိခိုက်စေသင့်ပါ။ * အော့ဖ်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်သီးခြားခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းနံပါတ်များကို အသုံးပြု၍ သတိထားပါ၊ သင်၏အဓိကနံပါတ်ကိုအော့ဖ်လိုင်းစျေးကွက်အတွက်အသုံးပြုပါ။
ပိုမိုလုံခြုံစွာနှင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းနှင့်အတူအောင်မြင်မှုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးဖို့အဆင်သင့်? အကြံပြုထားသည့်စာဖတ်ခြင်း - Local Search အတွက်ခေါ်ယူခြင်းလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုခြင်းလမ်းညွှန်.
ဒေသတွင်းစီးပွားရေးနာမည်များတွင် Geomodifiers ထည့်သွင်းခြင်း
နေရာအနှံ့အပြားရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ဒေသခံရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင်လုပ်လေ့ရှိသောအမှားတစ်ခုမှာ၎င်းတို့၏စီးပွားရေးနာမည်စာရင်းတွင်သော့ချက်စာလုံးများ (ပထဝီဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းများ) (မြို့၊ ခရိုင်၊ သို့မဟုတ်ရပ်ကွက်အမည်များ) နှင့်ပတ်သက်သည်။ geomodifier သည်သင်၏တရားဝင်စီးပွားရေးနာမည်သို့မဟုတ် DBA ၏အစိတ်အပိုင်းမဟုတ်လျှင် Google ၏လမ်းညွှန်ချက်များ ဤအလေ့အကျင့်ကိုအတိအလင်းတားမြစ်ပါ။
မလိုအပ်သောအချက်အလက်များကိုသင်၏အမည် (ဥပမာ - ဂူဂဲလ် (ဂူဂဲလ်) - ဂူဂဲလ်မဟုတ်ဘဲဂူဂဲလ်ကုမ္ပဏီအစား) တွင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတံဆိပ်များ၊ စတိုးဆိုင်ကုဒ်များ၊ အထူးအက္ခရာများ၊ နာရီများသို့မဟုတ်ပိတ်ထားသော / ပွင့်လင်းသောအခြေအနေ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာများ၊ /ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်, တည်နေရာ/ လိပ်စာသို့မဟုတ်လမ်းညွှန်များသို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ -“ Duane Reade ရှိ Chase ATM”) ကိုခွင့်မပြုပါ။
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်စျေးကွက်ရှာဖွေသူများသည်စီးပွားရေးအမည်များနယ်ပယ်များတွင်ပထဝီအသုံးအနှုန်းများကိုဖောက်သည်များအတွက်ဌာနခွဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုခွဲခြားရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်သို့မဟုတ်သူတို့စာရင်းတွင်ဤဝေါဟာရများပါ ၀ င်ပါကပိုမိုအဆင့်သတ်မှတ်မည်ဟုခံစားရသောကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များသို့မဟုတ်စျေးကွက်သမားများသည်စီးပွားရေးပထဝီဝေါဟာရများကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ယခင်စဉ်းစားသုံးသပ်ချက်အရဂူးဂဲလ်သည်သူနှင့်အနီးဆုံးဌာနခွဲကိုဖောက်သည်အားပြသရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဆင့်မြင့်မှုဖြင့် Google လုပ်ဆောင်သည်။ နောက်ဆုံးစဉ်းစားရန်သင်၏စီးပွားရေးခေါင်းစဉ်တွင်မြို့နာမည်တစ်ခုထားခြင်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ဟူသောအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ အမှန်တရားအချို့ရှိပါသည်။ သို့သော် Google ၏အုပ်ချုပ်မှုကိုချိုးဖောက်ရန်မသင့်ပါ။
ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုကိုသင်တည်ထောင်ပါကသင်၏မြို့တော်နာမည်ကိုသင်၏တရားဝင်စီးပွားရေးနာမည်တစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်သင်၏လမ်းအဆင့်ဆိုင်းဘုတ်များ၊ ဝဘ်နှင့်ပုံနှိပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်တယ်လီဖုန်းနှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အချက်အလက်များအရ geomodifiers များကိုစီးပွားရေးနာမည်တွင်ထည့်သွင်းရန် Google မှခွင့်မပြုပါ။ သင်၏အခြားဒေသတွင်းစီးပွားရေးစာရင်းများသည်သင်၏ဂူဂဲလ်အချက်အလက်နှင့်ကိုက်ညီစေလိုသောကြောင့်အခြားစည်းမျဉ်းအားလုံးနီးပါးတွင်ဤစည်းမျဉ်းကိုလိုက်နာသင့်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးနာမည်ကိုနေရာဒေသတိုင်းအတွက်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမရှိဘဲစာရင်းပြုစုရမည်။
* အထက်ပါအတွက်ခြွင်းချက်တစ်ခုရှိသည်ကိုသတိပြုပါ။ multi-location စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Facebook သည် geomodifiers အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့က Facebook Place စာရင်းများအကြားတူညီသော, shared အမည်အားခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့်၊ နေရာတစ်ခုစီ၏ Facebook Place စီးပွားရေးခေါင်းစဉ်သို့အထူးပြုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကဒီအချက်ကအချက်အလက်မကိုက်ညီတာကိုဖန်တီးပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အတွက်သိပ်စိတ်မပူပါနဲ့။ Multi- တည်နေရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်အသီးအသီးမဆိုအပြိုင်အဆိုင်အားသာချက် / အားနည်းချက် moot ပြန်ဆို, တူညီတဲ့လှေ၌တည်ရှိ၏။
၃။ Location Landing Pages ဖွံ့ဖြိုးရန်ပျက်ကွက်ခြင်း
သင်၏စီးပွားရေးတွင်ဌာနခွဲ ၂၊ ၁၀၊ ၂၀၀ ရှိပါကသင်၏ဒေသတွင်းစီးပွားရေးစာရင်းများနှင့်ဖောက်သည်များအားလုံးကိုသင်၏ပင်မစာမျက်နှာသို့ညွှန်ပြနေပါကကွဲပြားခြားနားသောသုံးစွဲသူအုပ်စုများအတွက်ထူးခြားသောစိတ်ကြိုက်အတွေ့အကြုံများပေးစွမ်းနိုင်မှုကိုသင်ကန့်သတ်ထားသည်။
Location landing pages ('local landing pages' (ခေါ် "local land pages")၊ "city landing pages") သည်ကုမ္ပဏီ၏သီးခြားဌာနခွဲတစ်ခုအကြောင်းကိုဖောက်သည်များ (နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်စက်များ) နှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးပို့ရန်ကြိုးစားသည်။ ဤသည်မှာဖောက်သည်နှင့်အနီးဆုံးနေရာသို့မဟုတ်သူသွားနေစဉ်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်အတွင်းသူရှာဖွေနေသည့်နေရာဖြစ်နိုင်သည်။
တည်နေရာပြမြေပုံများသည်ဌာနခွဲတစ်ခုချင်းစီ၏သက်ဆိုင်ရာဒေသဆိုင်ရာစီးပွားရေးစာရင်းများနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သင့်ပြီးအဆင့်မြင့်မီနူး (သို့) တည်နေရာရှာဖွေသူဝစ်ဂျက်မှတဆင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်အလွယ်တကူကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာအမြန် dos နှင့် don'ts အချို့ကို:
ဒီစာမျက်နှာများရှိအကြောင်းအရာသေချာအောင်လုပ်ပါ ထူးခြားသော။ ဤစာမကျြနှာမြားတှငျမွို့အမညျမြားကိုဖျောပွ။ ရိုးရိုးစာအုပျမြားကိုမပွောပါနှငျ့။ စာမျက်နှာတိုင်းအတွက်ကောင်းမွန်သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအရေးအသားတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
စာမျက်နှာတစ်ခုချင်းစီ၏ပထမ ဦး ဆုံးအရာသည်တည်နေရာ၏ပြီးပြည့်စုံသော NAP ဖြစ်သည်သေချာစေပါ (အမည်၊ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်).
သော့ကိုအကျဉ်းချုပ်လုပ်ပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ, ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ တစ်ခုချင်းစီကိုဌာနခွဲမှာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်
ထည့်သွင်းပါ ထောက်ခံစာ နှင့်ဌာနခွဲတစ်ခုချင်းစီအတွက်သင်၏အကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာ profile များကိုချိတ်ဆက်ထားသည်
ထည့်သွင်းရန်မမေ့ပါနှင့် ကားမောင်းလမ်းညွှန်major ည့်သည်များသည်အထင်ကရနေရာများဖော်ထုတ်ခြင်းအပါအဝင်စီးပွားရေးအနီးတွင်အလွယ်တကူတွေ့နိုင်သည်
အခွင့်အလမ်းကိုလျစ်လျူမရှုပါနှင့် အစေး ဘာကြောင့်မင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဟာသုံးစွဲသူလိုအပ်တာအတွက်မြို့ထဲမှာအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ
နာရီပေါင်းများစွာပြီးနောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်သွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုကမ်းလှမ်းရန်မမေ့ပါနှင့် (အီးမေးလ်၊ ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျ၊ တိုက်ရိုက်ချက်တင်စကားပြောစာသားပြန်ကြားနာရန်အချိန်မည်မျှကြာမည်ကိုခန့်မှန်းခြင်းဖြင့်
အကောင်းဆုံးမြို့တော်တည်နေရာမြေပုံများဖန်တီးရန်အနုပညာထဲသို့နက်ရှိုင်းစွာငုပ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ အကြံပြုထားသည့်စာဖတ်ခြင်း - ဒေသခံကမ်းတက်စာမျက်နှာများသင့်ရဲ့ကြောက်ရွံ့ကျော်လွှား.
စက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများကသဘောတူသည် ဤအချက် (၃) ချက်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု၏မြင့်မားသောဒေသဆိုင်ရာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုခံစားခွင့်ရရန်အခြားသူများထက် ပို၍ အန္တရာယ်များကြောင်း -
ရွေးခြင်း မှားယွင်းနေ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးစာရင်းများဖန်တီးသည့်အခါစီးပွားရေးအမျိုးအစား
တစ်ဦးအသုံးပြုခြင်း အတု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တည်နေရာနှင့်ဂူဂဲလ်ကိုသိရှိခြင်း
ထားရှိခြင်း မတိုက်ဆိုင် ဝဘ်ဝန်းကျင်ရှိအမည်များ၊ လိပ်စာများသို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်များ (NAP)
ပထမအနုတ်လက္ခဏာအချက်နှစ်ချက်ကိုထိန်းချုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ မှန်ကန်သောအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ။ တတိယအချက်ကတော့စီးပွားရေးပိုင်ရှင်ကသတိမထားမိဘဲလက်ထဲမှထွက်သွားနိုင်သည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ NAP မကောင်းသောအချက်အလက်သည်အောက်ပါအားလုံးသို့မဟုတ်အားလုံးမှထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။
Local Search ၏အစောပိုင်းရက်များမှာရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်မှားယွင်းနေသည့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမျိုးမျိုးသောအော့ဖ်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းရင်းမြစ်များမှအချက်အလက်များကိုအလိုအလျောက်ဆွဲထုတ်သည့်အခါ
ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒေတာများတစ်လျှောက်လုံးရွေ့လျားလမ်းကြောင့်ဖြစ်သည် ဒေသခံရှာဖွေရေးဂေဟစနစ်ပလက်ဖောင်းပေါ်ရှိမကောင်းသောဒေတာသည်အခြားသူများကိုယိမ်းယိုင်စေနိုင်သည်။ မကောင်းသော NAP သည်ဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေမှုအဆင့်များအပေါ်တတိယအပျက်သဘောဆောင်သောသက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုယူဆရသောကြောင့်၎င်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်နှင့်ရှင်းလင်းရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုနည်းပညာအားဖြင့်“ ကိုးကားစစ်ဆေးခြင်း” ဟုခေါ်ဆိုသည်။
ကိုးကားချက်စစ်ဆေးခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် NAP အမျိုးအစားများကို manual ရှာဖွေခြင်းနှင့်အခမဲ့ကိရိယာများအသုံးပြုခြင်းတို့ဖြင့်စတင်သည် စာရင်းစစ်ဆေးရန် Mozသင်၏အရေးကြီးသည့်ပလက်ဖောင်းအချို့တွင်သင်၏ NAP ၏ကျန်းမာရေးကိုချက်ချင်းအကဲဖြတ်ရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုသည်။ မကောင်းသော NAP ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်၎င်းကိုပြင်ရန်သို့မဟုတ်အချိန်သက်သာစေရန်ငွေပေးချေသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်သည်။ မြောက်အမေရိကရှိလူကြိုက်များသော ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းပါဝင်သည် Moz ဒေသခံ, ဖြူဖြူနှင့် Yext။ အကိုးအကားဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှု၏အပြီးသတ်ရည်မှန်းချက်မှာသင်၏အမည်၊ လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှနေရာအနှံ့အပြားရှိဝက်ဘ်တစ်လျှောက်တွင်သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။
Local SEO နောက်အဆင့်များ
လာမည့်နှစ်များ၌သင်၏ဒေသတွင်းစီးပွားရေးသည်အင်တာနက်နှင့်သုံးစွဲသူအပြုအမှုတိုးတက်ပြောင်းလဲပုံနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပါ ၀ င်လိမ့်မည်၊ သို့သော်ဤအရာအားလုံးကိုအခြေခံကျသောအခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်လိုအပ်သည်။ NAP ၏ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၊ လမ်းညွှန်ချက်လိုက်နာမှုနှင့်ခိုင်မာအားကောင်းသောလိုက်လျောညီထွေရှိသည့်အကြောင်းအရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်နေလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ထွန်းသစ်စဒေသဆိုင်ရာရှာဖွေရေးနည်းပညာများကိုရှာဖွေရန်ခိုင်မာသည့်အသံလွှင့်တင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်ဝဘ်ပေါ်တွင်မည်သို့ပေါ်လာသည်ကိုကြည့်လိုပါသလား။
အခမဲ့ Moz ဒေသခံစာရင်းအစီရင်ခံစာတစ်ခုရယူပါ
Tags: လိပ်စာခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုခြေရာခံခြင်းနံပါတ်များfacebook နေရာပထဝီမြေပုံ googleဂူဂဲလ် + ဒေသတွင်းဒေသတွင်းရှာဖွေရေးဒေသတွင်း seomozဒေသခံ MozနာမတျောကိုNAPဖုန်းနံပါတ်seo